Maitiro ekugadzira yako MVP Software mune mashanu ari nyore Matanho - NewGenApps
Business, Deredza Kutangisa Kumusoro, Kutanga kubvunza, startups, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Chishoma Chinogoneka Chigadzirwa (MVP) ndiyo yekutanga vhezheni yechigadzirwa ine shoma seti yezvinhu zvakakwana zvakakwana kuti usimbise zano rako. Kukura kweMVP kunotanga nekuvaka mashoma akanyanya kukosha maficha anoenderana nezvinodiwa nemushandisi. Vanyengeri vanongoregedza chigadzirwa kana vachifunga kuti zvakakodzera nguva nemari inobatanidzwa. Icho chikonzero nei iyi nzira yakakurumbira ndeyekuti inoderedza njodzi, inochengetedza mari uye inobatsira mukusimudzira mari. Iyo yakanaka MVP inofanirwa kutaurirana kukosha kwako, chengetedza vako vekutanga uye vape mhinduro kuti vatange kufambira mberi.
Unoziva here vamwe vanonyanya kufarirwa Software makambani akatanga neMVP - apuro, Microsoft, eBay, Kickstarter, Groupon, Unsplash, Google, Facebook nezvimwe zvakawanda?
MVP Software budiriro, dzimwe nguva inogona kuva, nzira yakareba uye inorema. Dambudziko rinomuka kana mabhizinesi akashandisa huwandu hukuru hwezviwanikwa mukuvaka iyo MVP uye zvichiri kutadza. Minimum Viable Product inonzi shoma nechikonzero chekuti inofanirwa kuve shoma. Unoziva here kuti ungasatomboda kunyora mutsara mumwechete wekodhi yekugadzira yako MVP Software? MVP haisi yekukwana. Zvava kuda kutanga. Saka mubvunzo ndewokuti- Ndinofanira kutanga sei MVP yangu Software budiriro? Ndinofanira kutanga ne dummy UI, mharidzo, zvimwe Software ine zvakakosha maficha, demo Software, beta application uye runyorwa rwemikana runoenderera mberi. Isu takanyora akateedzana matanho ekutungamira MVP yako Software kuvandudza kuitira kuti uite chaizvo zvinodiwa.
Ungatanga sei yako MVP Software Development?
5. Sarudza nzira yako:
Iwe unoverenga iyo nhamba chaiyo 🙂
Pane nzira dzakawanda dzaunogona kuendesa chigadzirwa chako mumusika. Sarudzo inoenderana nekuwanikwa kwezviwanikwa, nguva yakatarwa uye njodzi iripowo pazano rako.
a. Wizard weOz:
Wizard yeOz inyanzvi umo pane kugadzira a Software iwe unongogadzira interface inoita sekunge watoita basa rako. Chinonyanya kutariswa pano ndechekuudza vashandisi vako vekupedzisira kuti une chigadzirwa chiri kuvashandira. Iwe unounganidza data remhinduro kubva kune vashandisi vako uye uenderere mberi zvinoenderana. Iyo mukana ndeyekuva nemushandisi wechigadzirwa chako kunyangwe isati yagadzirwa uye kuwanikwa kwedata rakavimbika rinoratidza kushanda kweiyo pfungwa yako. Mamwe makambani akaroverera izvi Buffer, CardMunch, nezvimwe.
Concierge MVP ndiyo nguva panzvimbo yekugadzira a Software, unoita backend manually. Iyi nzira yainyanya kushandiswa naManuel Rosso, Muvambi weChikafu patafura. Chikafu paTable is a famba app inounganidza zvinodyiwa nevanhu uye inopa mazano ekubika uye inoratidza zvitoro zvegirosari. Muchikamu chekutanga, Manuel akaita ongororo nekubvunza zvinofarirwa nevanhu ndokuzonyora nemaoko runyoro rwezvitoro zvegirosari nemabikirwo ekupa mazano. Ikozvino, iyi app inobatsira zviuru zvevatengi kutenga zvine hungwaru uye zvitoro zvegirosari kuita kushambadzira kwakanangwa.
Piecemeal MVP ipfungwa yekushandisa zviripo zviwanikwa kuvaka chigadzirwa. Semuenzaniso, Groupon yakashandisa ayo echinyakare algorithms kuvaka chigadzirwa kungoedza kuti kana kwete pane chiri kudiwa mumusika. Kazhinji tinofungidzira kuti vashandisi vekupedzisira vachada chigadzirwa chedu asi izvo zvinogona kana kuti zvisingaitike. Kuvaka chigadzirwa chidimbu kunovimbisa kuti hatipambadze zviwanikwa zvakanyanya kupfuura zvinodikanwa mukubvisa chigadzirwa chedu pasi.
4.Tanga reverse piramidhi:
Kufungidzira kwakajairika ndekwekuti backend ndicho chinhu chekutanga kugadzirirwa chigadzirwa. Maitiro acho chaiwo akatarisana. Tinofanira kutanga tagadzira inoshandisika kumberi-kumagumo kungotarisa kana mushandisi angangofarira. Uyezve, iwe unogona zvakare kutanga neshambadziro yekushambadzira senge peji yekumhara, chinyorwa kana kushambadzira. Paunenge iwe ukayera mhinduro yekutanga wobva waenderera maererano .. Panguva yekusimudzira, tarisa pakuvaka iyo yakakosha uye yakakosha maficha usati waenda kune epamberi mashandiro.
3. Utsi Bvunzo:
Utsi bvunzo inzira yekumisikidza iyo inogona kuve mushandisi kufarira mune yako pfungwa. Utsi bvunzo inotarisa maitiro emushandisi echigadzirwa chako. Inopawo zano rekuti vangangofunga vanoshandisa chii uye iwe unogona kushandura chigadzirwa chako maererano.
a. Demo Vhidhiyo
(Iyo haisi vhidhiyo chaiyo)
Iwe unogona kugadzira demo vhidhiyo yechigadzirwa chako kuti utarise kana kana iwe usina kumira mumusika. Iri zvakare zano rakanaka kubvunza kune vanoona maonero maererano nezvechigadzirwa mune zvakataurwa. Iwe unogona kushandisa iyo vhidhiyo yekutsvaga mari uye kutaurirana zano rako kuchikwata chako.
b. Kumhara Peji
Peji yekumhara ndiyo inonyanya kufarirwa zano rekugadzira puratifomu yekutaurira zano rako. Izvi zvinobatsirawo mukugadzira akati wandei ekutungamira kune yako Software.
c. Kutanga Blog
Kutanga bhurogi kune yako yaunovavarira vatengi base kunobatsira mukugadzira traction uye zvakare inobatsira mukuisa yako yekumhara peji uye Website. Nekudaro, Hazvikurudzirwe kutsamira zvizere pakubhuroga sezvazvinogona kana kusakupa ruzivo rwakadzama. Izvo zvataurwa, zvinorumbidza zvakakwana peji rako rekutora uye vhidhiyo kuedza.
2. Vaka data yakatarwa
Zvino zvawaunganidza zviono - chii chinotevera? Iwe ikozvino unofanirwa kukoshesa yako MVP software maficha zvichienderana nemhinduro yemusika wagamuchira. Shandisa iyo data inotorwa kubva kumapeji ekumhara uye ekutanga anotora kuti uchinje chigadzirwa chako uye wedzera kumusoro. Iyo yekudyidzana runyorwa inogadzirwa inogona kushandiswa kune yakasarudzika kushambadzira uye kuwana ako ekutanga kubhadhara vatengi.
1. Sevha vatambi vako vekutanga - Shoko reMuromo
Iwe unoziva mangani emazwi-e-muromo shanduko anoitika kuburikidza nedhijitari Mapuratifomu?Apa ndipo patinokanganisa. Vanhu vanowanzovimba zvizere nematanho epamhepo kuti vawane kukurumidza. Chokwadi ndechekuti 7% chete yeWOM inobva pamhepo. Vashandisi vako vekutanga vamiriri verudzi rwako. Rangarira kuvarera.
Kana iwe uchida rubatsiro kuti MVP yako igadziriswe nekukurumidza, ndapota taura nesu. Tichafara kubatsira. Rombo rakanaka neMVP yako Software kubudirira.
Zomato Vs Swiggy - Ndiani Achakunda Iyo Nzara Mitambo?
Sep 6 | Kudya uye Zvinwiwa, Chikafu Dhirivhari App, startups